Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Xilli firaaqo, dhaqan iyo nolosha jaaliyadaha
Deegaanka dabiiciga iyo wakhtiga lagu qaato hawada bannaanka
Wakhtiga lagu qaato hawada bannaanku waa marka adigu aad dhaqdhaqaaq ku samaynaysid bannaanka dhanka deegaanka dabiiciga si aad u dareento wanaag una aragto waxyaabo iyadoo aanay jirin wax shuruud ah oo tartan ah.
Isla markaad ka baxdo albaabkaba waxaad adigu joogtaa deegaanka dabiiciga ah. Adigu waxaad haysataa cirki oo kaa sareeya, qorraxdii oo iftiiminaysa indhahaaga oo waxaad neefsan kartaa hawo fareesh ah. Waxan oo dhan waynu u baahannahay innageena ah dad si aynu u dareeno wanaag. Haddii weliba aad dhaqdhaqaaq ku samayso bannaanka waxaad dareemaysaa waaag dheeraad ah. Adigu waad sii xoogaysanaysaa, cuntada dhadhankeeda ayaa kuu sii fiicnaanaysa oo si fiican ayaad u seexanaysaa. In la joogo bannaanka ah deegaanka dabiiciga ah waxay ka hortagtaa cudurrada qaarkood, waxayna keentaa in aad dareento wanaag dheeraad ah. In dhaqdhaqaaq lagu sameeyo bannaanka waxaa lagu magacaabaa wakhtiga lagu qaato hawada bannaanka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan faa’iidooyinka wakhti lagu qaato hawada bannaanka kuna qoran bogga intarnatka ee Hawadu waa fareesh.
Akhri dheeraad ku saabsan xaqa tamashlaynta kuna qoran bogga intarnatka ee Håll Sverige rent.
Akhri dheeraad ku saabsan xaqa tamashlaynta kuna qoran buuga yar ee laga helo Hey'ada dawladeed ee deegaanka.
Gudaha Iswiidhan waxaa ka jira ururro badan kuwaas oo kaa caawinaya in aad hesho hawlo adigu aad jeceshahay. Iyadoo la sii marayo ururradan ayaad waxyaabo dheeraad ah ka baranaysaa deegaanka dabiiciga ah, xuquuqda tamashlaynta iyo waxyaabo kala duwan oo qofku ku samayn karo deegaanka dabiiciga ah. Caawimaadda ururrada kala duwan waxaa ku fududaanaysa in ka dib qofku keligii ama si wadajir ah uu dad kale ula baxo deegaanka dabiiciga ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ururrada kala duwan kuna qoran bogga intarnatka ee Hawadu waa fareesh.
Haddii aad heshay sharciga deganaansho laakiin aad weli degantahay dhismaha hoyga Hey'ada Socdaalka waad ka qayb qaadan kartaa hawlaha loogu talogalay magan-gelyo doonka.